Ngathi | I-Zhejiang Feegoo Technology Co, Ltd.
I-ZHEJIANG FEEGOO TECHNOLOGY CO., LTD lishishini kunye nenkampani ehlanganisiweyo eneshishini eliphambili elibonelela ngezixhobo zasekhaya kunye nehotele, iimveliso zococeko kunye nezindlu zangasese: Isomisi sesandla, Ihotele yeeNwele ezomileyo, Umgqomo wenkunkuma, Itafile yokutshintsha isepha, Iphepha wekhadi, njl mveliso yethu yasekwa ngo-2017, Iqela zobunjineli amava kunyaka-16 lemveliso, iqela intengiso unamava kunyaka-16 kumazwe, kunye ISO9001, CE, 3C, ROHS izitifiketi.
Iimveliso zethu ikakhulu zithunyelwa mpuma Asia, eYurophu, Australia, Melika, kwaye wafumana igama elihle kakhulu.
Njengomnye wabathengisi bezandla ezomileyo zembali, uFeegoo uneminyaka engaphezu kwe-16 ejonge kwitekhnoloji yesomisi yesandla, eyaqala ngophando kunye nokuvelisa iinjini ngo-2006, kunye nokuphuhlisa kunye nokuvelisa izixhobo zokumisa izandla zeJet ngo-2006. isomisi.
I-FEEGOO factorie kwi-NINGBO, enendawo engaphezulu kwe-10000 yeemitha zesikwere. Ngaphezulu kwe-100 labasebenzi abanezakhono abasebenza kwimigca emi-6 yemveliso ezimeleyo. Gcwalisa amasebe emveliso, kubandakanya umasifundisane we-inshorensi, umasifundisane weemoto, umasifundisane we-PCB, umasifundisane wendibano, umasifundisane wensimbi, iphepha lokupeyinta kunye nelabhoratri ukuvelisa ngaphezulu kwe-200,000 ii-dryer zonyaka.
Umthamo weR & D
I-Feegoo igxile kuphando kunye nasekwenzeni izixhobo zokumisa izandla ngaphezulu kweminyaka eli-15, kunye neqela le-R & D elite elineeinjineli ezili-15. I-Feegoo ibeka ukubaluleka okukhulu kwicandelo le-R & D kwaye ityale imali kuninzi lwabanye abavelisi kwaye ifake uthotho lwesomisi sesandla esili-18model ngaphezulu kweepatent ezingaphezu kwe-15.
Sizimisele ukusebenza nabathengi ukwenza iimveliso ezintsha kunye nokwenza inzuzo kunye. Sineqela loyilo olomeleleyo. Sijonge phambili ekusebenzisaneni nawe
Abahloli abasemgangathweni abangama-6 balawula ngokungqongqo zonke iinkalo zeemveliso ngokweenkqubo zovavanyo ezi-6, kubandakanya uvavanyo lweemoto, ukuhlolwa kwePCB, ukuhlolwa kwekhava, ukuhlolwa kweemveliso ezigqityiweyo kunye novavanyo lweemveliso ukuqinisekisa umgangatho weemveliso ngomgangatho weminyaka emi-5 yobomi benkonzo.
Izomisi zesandla iFeegoo zithunyelwe kumazwe angaphezu kwe-110 nakwizithili, kwaye ithatha i-30% yeemarike zaphesheya, ezinje nge-UK, iFrance, iJamani, iSpain, iRussia, i-Israel, i-Southeast Asia, i-India, i-USA, iCanada, iBrazil, njalo njalo ivuliwe.
Sigxila kumgangatho weemveliso, iimveliso zethu zinokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zamazwe ahlukeneyo. Ifumene isatifikethi esahlukileyo kumazwe ahlukeneyo.
Ukuqinisekiswa komgangatho okucacileyo kukaFeegoo kwiimveliso kuqinisekisiwe kwi-ISO9001, CE, CB, FCC, ROHS, GS, INMETRO kunye neCCC njl.